About — 3-ACT Film
What is 3-Act?
3-Act သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်၊ အကိုးအကား နှင့် အစီအစဉ်များကို မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမဆုံး အစီအစဉ်မှာ စုစုပေါင်း ၉ တွဲရှိသော ရုပ်ရှင်မဂ္ဂဇင်းတစောင်ကို မြန်မာ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမဂ္ဂဇင်းသည် ရုပ်ရှင်သမားများအတွက် ရုပ်ရှင်ဘာသာစကားကို တွင်ကျယ်စွာ သိရှိနိုင်ရန် နှင့် မြန်မာရုပ်ရှင်၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် သမိုင်းကြောင်းကို သုံးသပ်လေ့လာနိုင်ရန် စသည့်တို့အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
3-Act isafilm community in Myanmar that promotes cinema education, resources and events. Its first project is to publisha9-issue bilingual cinema magazine printed twiceayear. It is dedicated to filmmakers to be aware of the language of cinema and to be critical on local contemporary cinema landscape and national film heritage.
Why do we call it 3-Act?
ဇာတ်လမ်းတိုင်းတွင် အစ၊ အလယ် နှင့် အဆုံးဟူ၍ ပါဝင်မြဲဖြစ်ပါသည်။ သည့်အပြင် ဖြစ်ရပ်တိုင်းတွင်လည်း အစ၊ အလယ်နှင့် အဆုံးရှိစမြဲပင်။ ဘဝသည်လည်း အမိဝမ်းတွင်းမှာစ၊ အသက်ရှုခြင်းဖြင့် လူဖြစ်ကာ၊ သေဆုံးခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်မြဲပင်။ ဇာတ်ကောင်သည်လည်း သူ/သူမ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ခြင်းက စတင်ကာ ဘဝခရီးကိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ရပြီး အဆုံးတွင် အသိတစုံတရာ ရရှိခြင်း (သို့မဟုတ်) ဆုံးရှုံးခြင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်မြဲပင်။ အခင်း အခက် အဖြေဟူသော 3-Act တည်ဆောက်ပုံသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပြုအမူ ဖြစ်ရပ်အားလုံး၏ အချုပ်သဘောကိုဆောင်ပါသည်။ ထိုဇာတ်ကြောင်းပြော ပုံစံ၏ သဘာဝကို ရည်ရွယ်ရင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းကို 3-ACT ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
Every story hasabeginning, middle and end. Not only story but also every action has its beginning, middle and end. Life begins inside the womb, goes through breathing and ends with death. A character begins with who he/she is, goes throughajourney and ends withanewly gained insight or lost. 3-Act definesaclosure in our actions. To represent the nature of narrative in what we do, we name ourselves 3-ACT.
3-ACT Team at 3-ACT Cinema Magazine Launch Event